Odayaasha Dhaqanka Puntland oo bilaabay dhex-dhexaadinta Deni & Karaash - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Odayaasha Dhaqanka Puntland oo bilaabay dhex-dhexaadinta Deni & Karaash
Odayaasha Dhaqanka deegaannada Puntland ayaa waxaa la sheegay inay dhawaan bilaabeen wada-hadallo lagu dhex-dhexaadinayo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland iyo kuxigeenkiisa.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in saciid cabdullaahi Deni iyo Axmed Karaash ay labaduba aqbaleyn dalab dhex-dhexaadin ah oo uga yimid isimada Puntland,iyada oo dadaaladaas uu qeyb ka yahay Guddoonka Baarlamanka Puntland.
Shalay Gelinkii dambe ayaa Guddoonka Baarlamaanka Xarunta Golaha waxaa ay kulan gaar ah kula qaateen Madaxweyne Deni iyo kuxigeenkiisa, iyaga oo ka wada hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka labada mas’uul.
Odayaasha dhaqanka ee ku howlan xalinta khilaafka Madaxweynaha Puntland iyo kuxigeenkiisa ayaa waxaa hoggaaminayaan Garaad Saleebaan Garaad Maxamed iyo Islaan Ciise Islaan Maxamed,waxaana labada mas’uul ay u soo jeediyaan in Nin walba waxa uu tabanayo uu Guddoonka baarlamaanka hortiisa kusoo gudbiyo.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in kulamadii ay sii socdaan ilaa iyo inta Odayaasha Dhaqanka ay ku guuleysanayaan xalinta khilaafka hareeyay madaxweynaha Puntland iyo kuxgeenkiisa.
Previous articleDowladda oo ku dhawaaqday gargaar deg deg ah oo loo dirayo gobolada dalka
Next articleDHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 31-05-2020
Fatahaadaha iyo daadadka waa halista ugu weyn ay soomaaliya iminka wajaheyso taas oo ay weheliyaan ayaxa iyo Covid-19. Warbixin ay soo saartay hey’adda OCHA ayaa lagu sheegay...